Muran ka taagan doorashada Malawi - BBC Somali
Muran ka taagan doorashada Malawi
Image caption Madaxwaynaha Malawi Joyce Banda
Madaxwaynaha dalka Malawi Joyce Banda ayaa sheegtay in aysan waxba ka jirin doorashada wadankaasi ka dhacday waxaana ay amartay in mudo sagaashan bari ah lagu qabto doorasho cusub.
Iyada oo soo xiganaysa qodob kamid ah dastuur ka dalkaasi ayay go'aan kaasi qaadatay. waxayna ay sabab ooga dhigtay in wax isdabamarino baahsan ay jireen intii ay socotay dorashada, waxisdabamarinadaas waxaa ay ku sheegtay in ay kamid ahaayeen in dad-ku ay dhawr jeer codeeyeen, in wax isdabamarino lagu sameeyay waraaqihii codbixinta iyo in la xidhxidhay qaar kamid ah saraakiishii doorashada. Balse intaas kadib iyada oo ka hadashay ideecad gudaha ah waxaa ay sheegtay in ay si qalad ah usoo xigatay qodob kii dastuurka ka mid ka ahaa ee ay horay u adeegsatay.
Balse Madaxa Gudiga Doorashada ee Malawi Maxon Mbendera ayaa sheegay in Madaxwaynuhu aysan xaq u lahayn in ay laasho natijada doorashada.
Islamarkaas na ay guddiga doorashada oo kali ah xaq u leeyihiin go'aan kaasi oo kale.
Waxaa uu intaas ku daray in inkasta oo hanaankii casriga ahaa ee cod ka lagu tirinayay uu khalkhal ku yimid hadana doorashadu ay sharci tahay isla markaasna ay sii wadi doonaan tirinta codadadka.
Shalay galinkii dambe ayaa gudiga doorashada ee Malawi waxaa uu sheegay in ninka la tartamaya Madaxwayne Bandha ee Lagu magacaabo Peter Mutharika uu ku hogaaminayo doorashada boqol kiiba 42 halka Bandha-na ay haystay boqol kiiba soddon codadkii la tiriyay.